API ... Ndiani ari kuvaka APUI? | Martech Zone
Mugovera, October 28, 2006 China, Kurume 7, 2013 Douglas Karr
Isu takave neApplication Programming Interfaces kwenguva yakati rebei muindastiri. Dambudziko re API iri kutsvaga zviwanikwa zvekuvandudza zvinodiwa kuronga kusangana. Hazvisi nyore. Uchishandisa chero runyorwa rwemazuva ano rwemutauro, iwe unowanzo fanirwa kutumira akasiyana-siyana kusevhisi uye wozotora mhedzisiro uchishandisa XML (eXtensible Markup Mutauro).
Muna 2000, ini ndanga ndichishandira Database Kushambadzira Consultancy muDenver, Colorado uye isu tanga tine chishandiso chinonzi Sagent Solutions. Sagent yakazotengwa na Boka1. Boka1 rinozivikanwa mune dhatabhesi yekushambadzira chiitiko chekuvaka mamwe maficha ekushandisa. Handina chokwadi nezvakaitika kune zvigadzirwa zveSagent zvandaimboshandisa, asi zvaishamisa. Kurutivi rworuboshwe rwechiratidziro chako waive uine 'shanduko' uye iwe waigona kudhonza kuenda mukufambira kwebasa Zvese zvinopinda uye zvinobuda mushanduro yega yega zvinongozvisungira kune inotevera shanduko.
Nekudaro, ini ndinogona kuvaka kufambiswa kwemabasa kupinza faira, mepu yeminda mudhatabhesi, kushandura hunhu hweminda, kuchenesa kero, geocode kero, kutumira iyo faira rapera, nezvimwe. Maitiro ane data rakafanana. Mukuongorora 'kumashure-kumagumo' kwekufambiswa kwebasa, Sagent akanyatso chengetedza zano achishandisa XML. Izvi zvinonyatso kureva kuti iwe unokwanisa zvine simba kuvaka uye kuitisa kufambiswa kwebasa kana iwe uchida. Mhinduro yacho yaive mhinduro yematanhatu, asi kuvaka chirongwa chekushandisa dura rekuchengetedza kwakatora maminitsi panzvimbo pemazuva
Nekuuya kweAPIs, Web Services, SOAP, Flex, Ajax, nezvimwe… Ndiri kuziva kuti nei pasina munhu achifanira kuvaka web-based Chikumbiro Chirongwa Chekushandisa Mushandisi. Mune mamwe mazwi, dhonza uye udonhedze interface ye API kufona. Ndiine SOAP, makambani anochengeta WSDL (Webhu Tsananguro Mutauro) iro rinonyanya kuve chirongwa chehurongwa hwekuti ungashandise sei webhu saiti. Mumakore mashanu hapana munhu akagona kugadzira mhinduro yekududzira an API kana Webhu saiti kuona nekuona kufambiswa kwebasa? Pane chero munhu ari kushanda pane izvo?
Heino yangu $ 1 Bhiriyoni zano rezuva iri. Kana mumwe munhu akagona kuvaka Flex interface iyo inogona kuverenga WSDL uye nemaziso ichimiririra mafoni, ipapo unogona kudhonza uye kudonhedza kudyidzana pakati pekufona. Ndiyo irikushaikwa kwewebhu ... kuita kuti dandemutande riwanikwe kune chero munhu kuti 'aronge' mhinduro yavo vega vasinganzwisise chero mitauro.
Tags: APIkunyorera programming interfaceapui
Chokwadi Chinosuruvarisa Chemufaro